Baqattoonni Itoophiyaa 105 gara A/Kibbaa deemuuf turan Tanzaaniyaa keessatti hidhaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa 105 gara A/Kibbaa deemuuf turan Tanzaaniyaa keessatti hidhaman
Baqattoonni Itoophiyaa 105 gara A/Kibbaa deemuuf turan Tanzaaniyaa keessatti hidhaman
Baqattoonni Itoophiyaa gara Afrikaa Kibbaatti imalaa turan 105 Tanzaaniyaa keessatti too’annaa jala oolan. Baqattoonni kunniin kan qabaman magaalaa Dar es Salaam keessatti.
Tanzaaniyaa keessatti baqattoonni Itoophiyaa qabamuu fi dararamuun yeroo jalqabaaf miti. Baqattoonni poolisii dheefaaf jecha daandii fi haala lubbuu isaaniif hedduu hamaa ta’een Tanzaaniyaa, biyyoota jidduu Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa jiran biraas dabalatee, qaxxaamuruudhaaf yaalii godhan. Haalli kuni yeroo addaddaatti bayiinsa lubbuu lammiiwwan Itoophiyaa hedduuf (bineensaan nyaatamuu, konkolaataa keessatti ukkaamamuu fi dhukkubaan dhabamuu) sababa ta’eera. Bara 2012 keessa baqattoonni Itoophiyaa 40’n konkolaataa fe’aa keessatti ukkaamamamii bakka tokkotti dhuman.
Hayyamaan alatti daangaa Tanzaaniyaa ce’anii biyyattii keessatti qabamuun hidhaa woggaa hedduufi adabbii maallaqaa guddaaf nama saaxila.
Baqattoonni Itoophiyaa heddu manniin hidhaa Tanzaaniyaa, Maalaawii, Zaambiyaafi Mozaambiik keessatti akka dararamaa jiran yeroo addaddaatti gabaafamaa tureera.
Previous articleGanzabee Dibaabaa IAAF World Athlete of the Year jedhamte
Next articleBBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa raadiyoo kan eegalu ta’uu beeksise